Imbwa Inobereka - Imbwa Nyika | Imbwa Nyika (Peji 2)
Chirungu Springer Spaniel, imbwa inofara kwazvo
Iyo Chirungu Springer Spaniel rudzi rune hushamwari uye hwakangwara hwembwa iyo ichaita kuti yako mhuri kudonha murudo nekukurumidza. Pinda ugozviziva. :)
Dema uye Tan Coonhound, imbwa ine yakanakisa pfungwa yekunhuwidza
Iyo Nhema uye Tani Coonhound imbwa iyo, mukuwedzera pakuve shamwari yepamoyo yemhuri chero ipi zvayo inoshanda, ine pfungwa yakanakisa yekunhuwidza. Svika pakuzviziva.
Basset Hound, iyo imbwa ine inoshamisa mhuno
Iyo Basset Hound imbwa-hound-mhando imbwa iyo ine yakanyanya kusimukira pfungwa yekunhuwidza. Uye zvakare, inowirirana zvinoshamisa nevana nevakuru. Chii chauri kumirira kuti umuzive zviri nani? Kupinda!
Czech Terrier, furry yakakodzera vana nevakuru
Tinokuzivisa iwe kuCzech Terrier, inonakidza imbwa diki iyo mhuri yese ichave nenguva yakanaka nayo. Pinda ugozviziva. ;)
Imbwa yeSt. Hubert, furry inotapira kwazvo
Imbwa yeSt. Hubert imhuka inoyevedza: yakadzikama, ine rudo, yemagariro ... Inofarira kushamwaridzana nevanhu. Pindai mugoiziva.
Tingaite sei kuziva kana yedu Pitbull yakachena?
Iwe une Pitbull puppy uye unoda kuziva kana iyo imbwa iri yemhando chaiyo kana yakasanganiswa rudzi? Pinda uye uwane zviri nyore.
Dandie Dinmont Terrier, imbwa inosetsa kwazvo
Iyo Dandie Dinmont Terrier imbwa diki ye11kg, yakanaka kumhuri dzinoshanda uye / kana nevana. Yako yakadaro here? Tsvaga iyi imbwa inoyevedza.
Azawakh, rudzi runozivikanwa rwembwa
Iyo Azawakh rudzi rwembwa iyo inoda kumhanya uye kurovedza muviri nemhuri yayo. Iwe unoda kuzviziva here? Usazeze kupinda.
Czechoslovakian wolfdog, iyo inomhanya kwazvo furry
Kana iwe uri mumwe wevaya vanobuda kumhanya zuva rega rega uye uchida shamwari ine furry kuti uteedzere mutinhimira, pinda unosangana neCzechoslovakian wolfdog.
Alaskan Malamute, imbwa inofambidzana uye ine rudo
IAlaskan Malamute imbwa yeNordic inoda kutora nzendo refu nemhuri yayo. Pinda uye dzidza zvakawanda nezve ichi chinoshamisa chizvarwa.
Samoyed, iyo imbwa ine kutapira kutaridzika
Kana iwe uchigara mune inotonhora kana inotonhora mamiriro ekunze uye uchinakidzwa nekutamba mitambo, iyo Samoyed zvirokwazvo ichave shamwari yako yepamwoyo. Pindai mugoiziva.
Yakakura Swiss Gomo Imbwa, imbwa ine rudo kwazvo
Iyo Yakakura Swiss Gomo Imbwa imbwa hombe uye inoshamisa ine rudo inofarira kufamba uye kurovedza muviri, asiwo runyararo rwemba. Pinda usangane nemurume mukuru uyu.
Zvese zvawakamboda kuziva nezve American Staffordshire Terrier
IAmerican Staffordshire Terrier imbwa inogona kuve shamwari yepamusoro mumhuri. Pinda uye uzive ino yakanaka tarenda mukudzika.
Belgian Mufudzi imbwa inobereka tervueren
Kana iwe uchida kuva nembwa nyowani mumhuri yako ine rudo, yakavimbika uye inoteerera zvachose, iyi ndiyo Belgian Mufudzi tervueren. Tsvaga!
Herreño wolfdog, shamwari yepamoyo yevadi vemitambo
Kana iwe uri mumwe weavo vanofarira kuenda panze kunodzidzira mitambo uye uri kutsvaga rudzi runogona kukuperekedza, pinda unosangana neHerreño Wolfdog.
Presa canario, imbwa hombe uye yakadzikama
Iyo Presa Canario imhuka inoshamisa iyo, iine tarisiro yekutanga, inogona kuve yakanakisa furry shamwari mumhuri. Tsvaga kuti imbwa iyi yakaita sei.
Sangana neyakanaka Nhema Muromo Cur rudzi
Uri kutsvaga imbwa ine mutambo, yakangwara uye inoshamwaridzika iri pakati nepakati? Pinda uye uone iyo Nhema Muromo Cur, mhuka iyo mhuri yese ichanakidzwa.
Saarloos wolfdog, idiki diki inozivikanwa rudzi
Iyo Saarloos wolfdog rudzi rwembwa iyo ichiri isinganyanyo kuzivikanwa. Kuti tiwedzere, tinotaura nezvake mune chakakosha.
Irish Wolfhound, hofori inoyevedza
Iyo Irish Wolfhound yakanyarara, ine rudo uye yakakura kwazvo furry. Inogona kurema kusvika 70kg! Unoshinga kusangana naye here?
Chirungu Mastiff, inonakidza hofori
Chirungu Mastiff ndeimwe yembwa hombe dziripo. Inogona kurema kusvika ku100kg, zana makirosi erudo uye rudo. Imbwa yauri kutsvaga here? Tsvaga.
Cane corso kana Italian Mastiff, inotapira hofori
Isu tinokuzivisa iwe kuItari Mastiff kana Cane Corso, imbwa hofori inofarira caresses ... uye kurovedza muviri. Shinga kuiziva. ;)
American Akita, imbwa ine simba rakawanda
Kana iwe uri mumwe weavo vanofarira kuenda kunofamba kwenguva refu uye uchitsvaga shamwari ine furry, pinda unosangana neAmerican Akita. Iwe une chokwadi chekuchida. ;)
Mombe dzeAustralia Imbwa, shamwari yepamwoyo yevanoda zvemitambo
Kana iwe uchida mitambo uye uri kutsvaga shamwari ina-ina-makumbo anokwanisa kugara newe, pinda usangane neAustralia Mombe Dzembwa. Uchazvida. ;)
Iyo Tamaskan imbwa yakangwara uye ine simba yeFinland imbwa inogona kuve shamwari yako yepamoyo. Tinozvipa kwauri.
Iyo Akita inu ndeimwe yemarudzi ekaresa pasi rose, uye ndeimwe yeakanyanya kukosha: inoziva nhoroondo yayo uye kutarisirwa kwayinoita kuti ive inofara.
Kufunga nezvekugamuchira imbwa-saizi imbwa nekuti iwe unogara munzvimbo diki kwazvo? Pinda uye uwane kuti ndeapi akanakisa marudzi.
Iyo yakanakisa imbwa dzeAsia dzinobereka
Iwe ungade here kuziva kuti ndeipi imbwa dzakanakisa dzekuAsia imbwa kuti ugone kutora imwe? Hapana chakareruka pane kupinda nekutarisa.
American Maltese Bichon Imbwa Inobereka
Uri kutsvaga imbwa yekutora iyo idiki, ine rudo, yakavimbika, inotamba uye pamusoro pezvose zvinonakidza? Iyi ndiyo American Maltese Bichon.
Tsvaga iyo mhando yeiyo Garafian Mufudzi imbwa
Uri kutsvaga rudzi rwembwa iyo yakadzikama, inokudzwa, ine rudo uye yakatendeka? Usatarira kure, Mufudzi weGarafiano ndiye. Svika pakuzviziva.
Puggle imbwa dzinza
Iwe unoda kutora imbwa iyo iri diki muhukuru, ine rudo uye inofarira kuve nevanhu? Ipapo iyo Puggle ndiyo yako yakanaka mhando!
Kana iwe uri kufunga kutora kana kuwana imbwa yekuvhima iyo ine rudo, yakavimbika, inotamba uye ine hushamwari, iyi ndiyo Gordon setter.
Yorkie poo kana yorkipoo
Iwe unoda here imbwa idiki muhukuru, hypoallergenic, ine rudo, yakavimbika, uye ine zvishoma hunhu? Iyi ndiyo poo yeYorkie, tsvaga.
Rudzi rwembwa runonzi Puli
Kana iwe uchida kunakirwa nembwa ine hunhu-hwakanaka hunhu, zviri nyore kwazvo kudzidzisa uye zvakare ine jasi rakakura, iyi ipuli.
Imbwa dzinobereka Spinone Italiano
Kana iwe uchida kutora imbwa iyo, kunyangwe kana iri yakaoma, iri yakanaka-yakasikwa uye iri nyore-kuenda mhuka, iyo Spinone Italiano ndizvo zvauri kutsvaga. Tsvaga !!
Pakati Pakati peGerman Spitz Imbwa Inobereka
Kana iwe uchida kuva nembwa ine rudo kwazvo, yakavimbika, inotamba uye inonakidza, iyi ndiyo Medium yeGerman Spitz rudzi. Pinda uye uzviwane!
ChiJapan Spitz Imbwa Inobereka
Kana iwe uchida kuva nembwa ine rudo kwazvo, yakavimbika, inotamba uye inonakidza, iyi ndiyo chiJapan Spitz chizvarwa. Pinda uye uzviwane!
Borzoi imbwa dzinza
Iwe unoda here kunakidzwa nembwa ine iyo yakafanana hunhu seye greyhound? Urwu ndirwo rudzi rweBorzoi, pinda uzviwane!
Imbwa Inobereka Boyero De Flandes
Iwe unoda imbwa ine hushamwari, yakavimbika, inoteerera uye yakatendeka? Tarisa kwete kumberi, urwu rudzi rweFlemish Boyero. Pinda uye uzviwane!
Norwegian Buhund imbwa dzinobereka
Uri kutsvaga rudzi rwembwa yakavimbika, yakatendeka uye ine rudo? Ipapo iyo Norwegian Buhund ndiyo imbwa chaiyo kwauri. Pinda uone !!
Swedish Vallhund imbwa dzinza
Uri kufunga kutora imbwa uye unoda kuti ive yerudo, yakavimbika, inotamba uye ine hushamwari rudzi? Pinda uye uwane iyo Swedish Vallhund !!
YeAustralia Silky Terrier Imbwa Inobereka
Kana iwe uri kutsvaga kuwedzera mhuri uye uchida kutora imbwa diki, yeAustralia silky terrier ndiyo iyo. Tsvaga!
Uri kufunga kuwedzera mhuri yako nekutora imbwa yakasimba uye yakavimbika? Ipapo iwe unofanirwa kuziva iyo Whippet rudzi rwembwa, iwe unozoshamisika!
Kubereka kwembwa Basset Fawn yeBrittany
Iwe unoda kuziva here zvishoma nezve rudzi rwembwa inonzi Basset Fawn yeBrittany? Usatambisa chero imwe nguva uye pinda izvozvi!
Imbwa dzinobereka Basset Bhuruu Gasi
Iwe unoda imbwa yakavimbika kuvaridzi vayo, ine hunhu uye muvhimi akanaka? Iyi ndiyo mhando yeGascony Blue Basset. Zvizive!
Kufunga kutora rudzi rudiki rwembwa uye kufunga kusarudza pakati peCavapoo kana Cockapoo? Pinda uye uone mutsauko wavo !!
Mhando dzakasiyana dzepencencos
Iwe unofarira here uye unoda kuziva kuti mangani marudzi e hounds aripo? Pinda uye uwane mapenencos anozivikanwa muSpain.
Aussiedoodle imbwa dzinza
Kana iwe uri kutsvaga kutora imbwa diki iyo ine rudo, iri nyore kuenda uye yakavimbika kune varidzi vayo, iyi ndiyo Aussiedoodle. Pinda uone !!
Morkie imbwa dzinobereka
Iwe unoda here kunakidzwa nembwa yemhando yekutambisa iyo ine yakanakisa yeYorkshire Terrier neMalta Bichon? Pinda uye uwane iyo morkie, inokushamisa iwe !!
Cavachón imbwa dzinobereka
Iwe unoda here kuva neakaganhurirwa zvachose, ane hushamwari uye anotapira imbwa dzinza? Pinda uye uwane iyo cavachón, pasina mubvunzo ichakushamisa iwe!
Lagotto Romagnolo imbwa dzinza
Kana iwe uri kufunga nezvekuwana imbwa ine rudo nevanhu uye dzimwe mhuka dzinovaraidza uye inozivikanwa kwazvo, pinda uye uwane iyo Lagotto Romagnolo rudzi!
Havanese imbwa dzinza
Uri kufunga kutora rudzi rudiki rwembwa runodakadza? Pinda uye uwane iyo Havanese Bichon, zvinokushamisa iwe!
Diki Brabantino imbwa dzinza
Kufunga nezvekugamuchira imbwa idiki muhukuru, ine rudo uye inotamba? Rudzi rwakanakisisa idiki Brabantino. Pinda uone!
Goldendoodle hybrid imbwa dzinza
Iwe unoda imbwa here ine rudo, inotamba, yakatendeka uye isingaregi yakawandisa bvudzi? Tsvaga iyo yakasanganiswa mhando inonzi Goldendoodle. Zvinokushamisa iwe !!
Tsvaga iyo mhando yeHavanese
Isu tinokuudza iwe zvese nezve rudzi rweHavanese, rwakagadzirwa pachitsuwa cheCuba uye inomira kunze kune yakanaka jasi.
Mbeu dzeEurasier imbwa
Iwe unoda here kuwedzera mhuri nekutora imbwa yakanaka-yakasununguka, ine rudo, inotamba, yakangwara uye ine hutsinye? Iyi ndiyo imbwa yeEurasier. Tsvaga !!
Thai Ridgeback Imbwa Inobereka
Kana iwe uchida kuwedzera mhuri uye kuronga kutora, iyo Thai Ridgeback imbwa dzinza ndidzo dzinokurudzirwa iyo. Pinda uye uwane hunhu hwayo !!
Chesapeake Retriever Imbwa Inobereka
Kana iwe uchitsvaga ine rudo, yakavimbika, imbwa yakadzidza inoteerera kwauri nguva dzese, iyi ndiyo Chesapeake Retriever imbwa dzinza. Discover it !!
Imbwa dzinobereka Coton de tuléar
Uri kutsvaga shamwari imbwa ine hunhu hwakanaka kwazvo uye ine rudo kwazvo? Tsvaga iyo Coton de tuléar imbwa dzinza, hauzombo nyadziswa!
Boerboel imbwa dzinobereka
Kana iwe uchida kunakidzwa nembwa hombe iyo inotamba, inokudzwa, ine rudo, yakavimbika uye imbwa yakanaka ine vana, iyi ndiyo Boerboel. Tsvaga !!
Berger imbwa dzinoberekerwa ne picardie
Kana iwe uchida kutora imbwa inoyemurika, ine rudo, yakavimbika uye inokuteerera iwe mune zvese, urwu ndirwo rudzi rweBerger rwe picardie. Discover it !!
Italian volpino imbwa dzinza
Kana iwe uchida kutora imbwa isiri yakakura, ine rudo, yakatendeka, inotamba uye ine pini yechimiro, iyi ndiyo volpino yekuItaly. Tsvaga !!
Dutch Mufudzi wedzinza
Kana iwe uchida kuve neinoshanda nesimba, yakavimbika, ine rudo, yakashinga uye inoranga imbwa, uyu ndiye Mufudzi wechiDutch. Pinda uye uwane hunhu hwayo!
Iyo Irish Wolfhound
Kana iwe uri kufunga nezvekutora nhengo nyowani ine rudo nedzimwe mhuka dzese uye nevanhu vari pamba, iyi iIrish Wolfhound. Tsvaga
Mufudzi weBelgian Mufudzi
Isu tinokuudza iwe nezve hanya uye hunhu hweBelgian Mufudzi wembwanemumarudzi ayo ese, imbwa inozivikanwa kwazvo.
Unogona de Palleiro
Kana iwe uchida imbwa yakatendeka, ine rudo nevanhu uye inoshanda zvakanyanya, unofanirwa kusangana nembwa yePalleiro, imbwa huru kuve nayo pamba. Kupinda!
ChiFinnish Spitz imbwa dzinza
Uri kutsvaga ane simba, ane hushamwari, akangwarira uye anoteerera rudzi? Zvino chaunoda iwe chiFinnish Spitz. Pinda uone !!
Norwegian Elkhound imbwa dzinobereka
Kana iwe uri kufunga nezvekuwedzera mhuri yako nechipfuyo, iyo yeNorway Elkhound imbwa dzinza ndidzo dzako. Pinda uye uwane hunhu hwayo.
Mufudzi weBelgian Groenendael
Uri kutsvaga yakanaka, yakatendeka, ine imbwa ine rudo inoda vana? Mufudzi weBelgian Groenendael imbwa chaiyo iwe. Tsvaga !!!
Nhema Pointer imbwa dzinza
Kana iwe uchida kuva nembwa inozvimiririra asi yakavimbika kune varidzi vayo uye ine rudo, iyi ndiyo nhema tema. Pinda uone !!
Kana iwe uchida kuva nembwa iyo inokwezva kutarisisa kwese kwainoenda, iine inoshamisa chitarisiko uye ine rudo nevana, iyi ndiyo hofori poodle. Tsvaga !!
Chirungu Foxhound imbwa dzinza
Kana iwe uchitsvaga ane simba, ane hushamwari uye anoshanda chaizvo rudzi rwembwa, iyo Chirungu Foxhound ndiyo imwe. Pinda uye uwane hunhu hwayo.
American Foxhound Imbwa Inobereka
Kana paine rudzi rwembwa iyo isingaperi, isina zororo, inotamba uye pamusoro pezvose zvakavimbika kumuridzi wayo, iyi ndiyo American Foxhound. Pinda uone !!
Isu tinokuudza zvese zvakadzama nezve iyo Shetland Sheepdog dzinza, imbwa yakafanana neiyo diki Collie yakangwara kwazvo.
Kana iwe uchida rudzi rwembwa iyo inoshanda nesimba, yakavimbika, ine rudo, uye inochengeta, iyo Austrian Pinscher ndiyo yakanaka iyo. Pinda uye uwane hunhu hwayo !!
Mudi imbwa dzinobereka
Iwe unoziva iyo Hungarian Mudi imbwa dzinoberekana? Uyu murume anoshanda nesimba, akavimbika, ane rudo uye akazvimirira murume. Pinda uye uwane zvese zvirimo.
Imbwa yePeruvia isina vhudzi
Kana iwe uchida kuziva iyo inofarira kuziva imbwa dzinza dzakadai sePeruvia isina vhudzi imbwa, pinda uye uwane ese ayo maitiro, hanya uye kuti yakatanga sei.
Affenpinscher imbwa dzinza
Iwe unoda kuziva rudzi rwembwa diki saizi, inodakadza zvakanyanya uye yakashata? Tsvaga iyo Affenpinscher, imbwa inokushamisa iwe.
Ziva zvese nezveSpanish Hound imbwa dzinza. Kuchengeta kwako, hunhu hwepanyama kana hutano uye mazano ehutano. Pinda uone.
Sealyham terrier imbwa dzinza
Iwe unoda kutsvaga chaiyo show imbwa, iri inosetsa, yakavimbika uye inozivikanwa nevana? Sangana nerudzi rweSealyham terrier, zvinokushamisa iwe.
Griffon imbwa dzinza
Kana iwe uchida kunakidzwa neine simba, ine rudo, yakashinga uye inotamba imbwa, chero yemhando dzakasiyana dzerudzi rweGriffon ndidzo dzako. Vazvizive.
Chiputukezi Mvura Imbwa
Isu tinokuudza zvese nezvePortugal Mvura Imbwa dzinza, imbwa inoshandiswa nevaPutukezi vafambisi vechikepe kwemakore uye ine hunhu hwakanaka.
Chirungu Mufudzi wedzinza
Waizviziva here kuti rudzi rweChirungu Mufudzi rudzi rune rudo, rwakavimbika uye runobatsira imbwa? Pinda uye uone, iwe uchashamisika.
Tsvaga zvese nezve Rudzi rwembwa yePekingese, mhuka diki asi ine moyo muhombe uye tsitsi izvo zvisingakusiye usina hanya.
Isu tinokudzidzisa iwe yese nhoroondo, mabviro, hunhu, hanya, hunhu uye zvirwere zvePomeranian Lulu imbwa dzinza. Zvizive!
Toy poodle kana poodle
Iwe unoda kuziva hunhu, mavambo, hanya, hutano uye hunhu hwerudzi rwembwa inonzi Poodle kana Poodle? Teerera.
ChiHungary Pointer kana Vizsla
Tsvaga hunhu, mavambo, hanya, zvirwere uye hunhu hwembwa yekuvhima senge iyo Hungarian Pointer. Iwe haugone kurasikirwa neizvi!
Isu tinokuudza zvese nezveValencian Ratonero rudzi, imbwa diki asi inoshingairira uye inofara imbwa yakakwana kune chero imba.
Iwe unoda kuziva mavambo, hunhu, hunhu uye hanya zvinodaiwa nerudzi rweMajorero wembwa? Pinda uone.
Musiyano uripo pakati peCardigan naPembroke Welsh Corgi
Nekuda kwekufanana kwavo kwakasimba panyama, dzimwe nguva zvinonetsa kusiyanisa Cardigan Welsh Corgi kubva kuPembroke. Tinogona kuvasiyanisa nekupinda kune zvimwe zvinhu.
Hunhu hukuru hwePembroke Welsh Corgi
Inobva kuSouth Wales, iyo Pembroke Welsh Corgi ndeimwe yemhando dzakakurumbira nekuda kwehunhu hwayo uye kutaridzika kunoyevedza.
Isu tinokuudza zvese nezveCatalan imbwa Gos d'Atura, inozivikanwawo seCatalan Mufudzi. Imbwa ine hunhu hwakanaka.
Isu tinokuudza iwe zvese nezvePodenco Canario kuberekesa, imbwa, inononoka, imbwa yekuvhima yakangwara iyo nhasi yave shamwari yakanaka imbwa
Scottish Greyhound kana Deerhound
Iwe unoda kuziva hunhu, hanya, hunhu uye zvirwere zverudzi rwembwa isingazivikanwe seScotland Greyhound? Tsvaga !!
Isu tinokuudza iwe zvakaita imbwa dzemvura mhando, imbwa dzinoshanda chaizvo dzaishandiswa pakuvhima munzvimbo dzine mvura.
Iyo Komondor imbwa hombe yekuberekesa inozivikanwa neyavo dreadlocks jasi, saka isu tinokuudza zvese nezvazvo uye hunhu hwayo.
Romanian Mufudzi kubva kuMioritza
Tsvaga hunhu, hanya, mavambo, zvirwere uye zvimwe zvakawanda zveMioritza Romanian Mufudzi wedzinza, rudzi runodzivirira kwazvo
Kushuva nezvekufudza imbwa? Pinda uye uwane Maremma Mufudzi, iko kutarisira kwaanoda, hunhu uye hunhu.
Isu tinokuudza iwe zvese zvakadzama zveiyo hombe yeBrazil Fila imbwa dzinza, imbwa ine munhu akatendeka chaizvo hunhu nemhuri yake.
Iwe unoda here kuziva iyo Norwich Terrier zvakadzama? Isu tinokuudza iwe kutarisira kwainoda, hunhu uye mabviro erudzi urwu. Tsvaga!
Iwe unoda kuziva here dzakasiyana mhando dzeHound dziripo? Pinda uye uwane tarisiro yaunoda, hunhu uye hunhu.
Iwe unoda kudzidza zvakawanda nezve iyo Leon Shepherd imbwa dzinza? Pinda uye uwane tarisiro yaunoda, hunhu uye maitiro.
Border Collie vana
Border Collie vana vari mukuda kwakanyanya kwehungwaru hwavo. Tsvaga nyaya yake uye kuti ave imbwa sei iye nhasi.
Iyo Airedale Terrier rudzi rwekuda kwakanyanya kwekuvimbika kwayo nehungwaru. Tsvaga nyaya yake uye kuti ave imbwa sei iye nhasi.
Isu tinokuudza zvese nezve iyo Alsatian Mufudzi wedzinza, iri musiyano wembwa yeGerman Mufudzi ane vhudzi refu.
Iyo Newfoundland irudzi rwuri mukuda kukuru kwekuvimbika kwaro uye njere. Tsvaga nyaya yake uye kuti ave imbwa sei iye nhasi.
Imbwa dzekutambisa dzinobereka, idiki
Isu tinokuratidza kuti ndedzipi dzinonyanya kufarirwa imbwa dzekutambisa, imbwa diki diki dziripo uye ndedzipi dzakanakira.
Imbwa dzemufudzi dzinobereka
Tinokuratidza mhando dzakasiyana dzembwa dzinofudza, dzakasanganisirwa muchikamu ichi chekuti dzaive dzichishanda imbwa mumapurazi.
Isu tinokuudza kuti ndeapi maitiro uye hunhu hweiyo Italian Greyhound kana Italian Greyhound, mhuka yakadzikama iyo yakakodzera kune chero imba.
Isu tinokuudza zvese zvakadzama nezve inozivikanwa yeGerman Miniature Pinscher kuberekesa. Imbwa inofara uye inoshingaira kugara nemhuri.
Iyo nhema Lab ndeye rudzi rwuri mukuda kukuru kwekuvimbika kwayo uye njere. Tsvaga nyaya yake uye kuti ave imbwa sei iye nhasi.
Gomba Bull Terrier
Isu tinokuudza zvese hunhu hwakanakisa yeAmerican Pitbull Terrier imbwa, yakasimba, ine rudo uye inozivikanwa imbwa.
Catalan Mufudzi Imbwa
ICatalan Sheepdog rudzi rwuri kudiwa zvakanyanya rwehuswa hwayo uye hwekushamwaridzana. Tsvaga nhoroondo yayo uye kuti yave imbwa sei nhasi
Iyo Shar Pei rudzi runonyanya kudiwa nekuda kwekushomeka kwejasi rayo. Tsvaga nyaya yake uye kukura kwaakaita imbwa iye nhasi.
Swiss White Mufudzi
Iwe unoda kusvika pakuziva iyo White Swiss Mufudzi zvakadzama? Isu tinokuudza iwe kutarisira kwainoda, hunhu uye mabviro erudzi urwu. Tsvaga!
Tinokupa iwe hwese ruzivo uye hunhu hwerudzi rweLhasa Apso, imbwa diki inomira kunze kune yakanaka uye refu jasi.
IChinese Crested rudzi rwunodiwa zvakanyanya nekuda kwekushomeka kwejasi rayo. Tsvaga nyaya yake uye kuti ave imbwa sei iye nhasi.
American Stanford Bhuruu
IAmerican Stanford Blue rudzi runonyanya kudiwa uye runodiwa. Tsvaga nyaya yake uye kuti ave imbwa sei iye nhasi.
Iyo Basque Mufudzi rudzi rwakanyanya rwunodiwa uye rwunodiwa. Tsvaga nhoroondo yake uye kukura kwaakaita imbwa inokudzwa uye nehungwaru zvaari nhasi.
Iyo Greyhound yeItari
Iwe unoda kuziva iyo Italian greyhound zvakadzama? Isu tinokuudza iwe kutarisira kwainoda, hunhu uye mabviro erudzi urwu. Tsvaga !!
Isu tinokuudza iwe hwese hunhu hwerudzi-rwebvudzi Dachshund rudzi, imbwa ine hupenyu uye inofambidzana, inozivikanwa sedachshund.
Isu tinokuudza zvese zvakadzama zveiyo Ibizan Hound rudzi, imbwa yakatetepa yakatsaurirwa kuvhima iyo yakabva pachitsuwa cheIbiza.
Iwe unoda kuziva iyo yeScotland terrier dzinza mukudzika? Isu tinokuudza iwe kuchengetwa kwainoda, hunhu uye mabviro erudzi urwu. Tsvaga !!
Iwe unoda kuziva rudzi rweBedlington terrier zvakadzama? Isu tinokuudza iwe kutarisira kwainoda, hunhu uye mabviro erudzi urwu. Tsvaga !!
Iwe unoda kuziva zvakadzama iyo West Highland White Terrier rudzi? Isu tinokuudza iwe kutarisira kwainoda, hunhu uye mabviro erudzi urwu. Tsvaga !!
Hofori imbwa dzinobereka
Tinokuratidza mamwe emhando dzinozivikanwa uye dzinonakidza hofori dzembwa munyika, imbwa dzinogona kurema anopfuura makumi mashanu kilos.
Iwe unoda kuziva iyo Burgos Retriever zvakadzama? Isu tinokuudza iwe kutarisira kwainoda, hunhu uye mabviro erudzi urwu. Tsvaga !!
Isu tinokuudza zvese zvakadzama uye hunhu hwerudzi rweLeonese Mastiff yekufudza, inozivikanwawo seSpanish Mastiff.
Ziva mhando dzembwa hombe
Isu tinotaura pamusoro pedziri hombe imbwa dzedzinza uye ndeapi marudzi anozivikanwa kwazvo, nehunhu hwavo hukuru.
Isu tinokuratidza iwo ese makuru hunhu hwePutukezi Podenco imbwa yekuvhima, inova zvakare yakanaka shamwari shamwari imbwa.
Prague Mouse kana Prague Buzzard
Isu tichakuudza zvese nezve iyo Prague Mouse kana Prague Mouser rudzi, imbwa diki iyo inofara kwazvo, inoshanda uye yakangwara, yakanaka kumhuri.
Rudzi rweGiant Schnauzer imbwa hombe inotangira kuGerman ine hunhu uye hunhu.
Iwe unoda here kuziva iyo Yorkshire terrier zvakadzama? Isu tinokuudza iwe kutarisirwa kwazvinoda, chikafu uye zvinogona kuitika zvirwere zverudzi urwu. Vazvizive.
Isu tinokuudza zvese nezverudzi rweJapan mavambo Tosa Inu, imbwa hombe iyo inopa yakawanda yekuvimbika uye rudo kumhuri yayo.
Iwe unoda kuziva iyo Pomeranian toy mune zvakadzama? Isu tinokuudza iwe kutarisira kwainoda, chikafu uye zvinogona kuitika zvirwere zverudzi urwu. Vazvizive.
Isu tinokuudza zvese zvakadzama nezve imbwa dzeBichon Frize, idzo dzinomira dzakachena chena uye dzakapfava mvere.
Sangana nerudzi rweAmerican Bulldog
Isu tinokuudza zvese nezve American Bulldog rudzi rwemhuri yeBulldog, imbwa yakasimba iyo zvakare inofara uye yakangwara.
Tsvaga zvese nezve Afghan Greyhound
Isu tinokuudza zvese nezve yakanakisa mhando yeAfghan Greyhound, inozivikanwawo seAfghan Hound. Imbwa yakangwara ine jasi rinoshamisa.
Iwe unoda here kuziva iyo Chirungu Setter zvakadzama? Isu tinokuudza iwe kuchengetwa kunodiwa nerudzi urwu, chikafu, kuchengetwa uye zvinogona kuitika zvirwere Vazvizive.
Iwe unoda here kuziva iyo yeIrish Setter zvakadzama? Isu tinokuudza iwe kutarisirwa kwazvinoda, chikafu uye zvinogona kuitika zvirwere zverudzi urwu. Vazvizive.
Iwe unoda here kuziva iyo Caucasian Mufudzi imbwa zvakadzama? Isu tinokuudza iwe kutarisirwa kwazvinoda, chikafu uye zvinogona kuitika zvirwere zverudzi urwu. Vazvizive.
Tinokuudza zvese nezveYorkshire Terrier, imwe yemhando diki dzinozivikanwa nhasi, idzo dzine hunhu hukuru.
Spanish imbwa yemvura
Iwe unoda kusvika pakuziva iyo Spanish Mvura Imbwa zvakadzika? Isu tinokuudza iwe kutarisirwa kwazvinoda, chikafu uye zvinogona kuitika zvirwere zverudzi urwu. Vazvizive.
Tsvaga zvese hunhu uye ruzivo nezve iyo Fox Terrier kuberekana, iine twake twakatwasuka uye tambo-dzine vhudzi dzakasiyana.
Iwe unoda kuziva iyo Dogo zvakadzama? Isu tinokuudza nhoroondo yaro, kutarisirwa kwarinoda, chikafu uye zvinogona kuitika zvirwere zverudzi urwu. Vazvizive.
Iwe unoda here kuziva iyo Havanese zvakadzama? Isu tinokuudza nhoroondo yaro, kutarisirwa kwarinoda, chikafu uye zvinogona kuitika zvirwere zverudzi urwu. Vazvizive.
Iwe unoda kuziva Mastiff zvakadzama here? Isu tinokuudza nhoroondo yaro, kutarisirwa kwarinoda, chikafu, kurovedza muviri uye kudzidziswa kwerudzi urwu. Vazvizive.
Isu tinokuudza iwe zvese nezve hunhu uye hunhu hweiyo diki Shih Tzu imbwa, mhuka ine hunhu hwakanaka kwazvo.
Iwe unoda kuziva iyo American Stanford zvakadzama? Isu tinokuudza nhoroondo yayo, hanya, chikafu, kurovedza uye kudzidziswa kwerudzi urwu. Vazvizive.
Ko Labrador Retriever inobereka sei
Isu tinokuudza iwe nezverudzi rwakakurumbira rweLabrador Retriever, hunhu hwayo, kuchengetwa kwayo uye nei iri imbwa huru shamwari.
Chii chaunofanira kuziva nezvaJack Russell
Isu tinokuudza zvese nezve rudzi rweJack Russell Terrier, imbwa diki ine simba rakakura uye simba iro rinozivikanwa kwazvo nhasi.
Sangana nerudzi rweBoxer
Tinokupa iwe zvese nezve imbwa dzeBoxer, idzo dzinofara uye dzine simba, dzakanakira mhuri.
Sangana nerudzi rweGolden Retriever
Tsvaga hunhu uye hunhu hweiyo Golden Retriever imbwa, imwe yemhando dzinozivikanwa nhasi. Ndeipi hanya yaunoda?
Hunhu hweShar Pei rudzi
Isu tinokuudza zvese nezve rudzi rweShar Pei, imbwa yakasarudzika iyo ine rakasarudzika jasi rizere nemakaka. Ndeipi hanya yaunoda?
Isu tinokuudza iwe zvese zvakadzama uye hunhu hwehukama hweShiba Inu imbwa, yakasimba, inofara uye inoshanda kwazvo rudzi.
Hunhu hwePug kana Carlino
Isu tinokuudza kuti ndedzipi hunhu hweiyo Pug kana Carlino imbwa, imbwa yekumba ine hunhu hukuru hunofambisa mufaro.
Iwe unoda here kuziva iyo American Staffordshire zvakadzama? Isu tinokuudza nhoroondo yayo, hanya, chikafu, kurovedza uye kudzidziswa kwerudzi urwu. Vazvizive.
Iwe unoda kuziva iyo American Bully imbwa zvakadzama? Tinofanira kukuudza nhoroondo yayo, chikafu, kurovedza uye kudzidziswa kwerudzi urwu? Pinda uye uzviwane.
Isu tinokuudza zvese zvese zverudzi rweBernese Mountain Imbwa, imbwa yekuSwitzerland inoshanda ine hunhu hukuru hwekugara nayo semhuri.
American eskimo imbwa
Iwe unoda kuziva iyo American Eskimo Imbwa zvakadzama? Tinofanira kukuudza nhoroondo yayo, chikafu, kurovedza uye kudzidziswa kwerudzi urwu? Pinda uye uzviwane.
Iwe unoda kuziva iyo Border Collie zvakadzama? Tinofanira kukuudza nhoroondo yayo, chikafu, kurovedza uye kudzidziswa kwerudzi urwu? Pinda uye uzviwane.
Tsvaga zvese zvakadzama nezve yakakura Dogue de Bordeaux rudzi, kubva kwayakatangira kusvika kune hunhu uye nekuchengetwa kwainoda.
Tibetan Mastiff kana Tibetan Mastiff, hunhu hwerudzi
Iyo Tibetan Mastiff kana Tibetan Mastiff rudzi rwembwa hofori ine simba rakakura uye hunhu hwakanaka uye hwakavimbika. Tinokuudza zvese nezvake
Iwe unoda kuziva zvakadzama hunhu, nhoroondo, hanya uye kutaridzika kwerudzi urwu rwunonzi Belgian Griffon? Pinda uye uwane gwara kunzira dzembwa
Maitiro eSiberian Husky
Kutsvaga imbwa iwe yaunogona kuenda kumhanya kana kufamba kwenguva refu nezuva nezuva? Kana zvirizvo, pinda mukati uye isu tichakuudza iwe kuti weSiberia Husky anotaridzika sei.
Iwe unoda kuziva zvakadzama hunhu uye nhoroondo yerudzi urwu inonzi Tibetan Spaniel kana sekuzivikanwa kwayakaitwa munguva yakapfuura, imbwa dzemamongi?
Hunhu uye kuchengetwa kweChirungu Stanford
Kufunga nezvekuwana yakasimba imbwa rudzi senge yeChirungu Stanford? Kunyangwe iri imbwa inokudzwa kwazvo, iwe unofanirwa kuziva hunhu uye hanya.
Zvakajairika Zvirwere muBeagle Imbwa
Imbwa dzeBeagle dzine zvimwe zvirwere zvakajairika zvaunofanirwa kuziva kuti udzivise kana kumisa kana zvikatambura nazvo.
Nzira yekuziva chii chinonzi genetics yeimbwa?
Iwe une rudzi rwembwa iri mongrel uye iwe hauzive kuti rudzii rwunobva? Ungade here kuziva kuti genetics rembwa chii? Pinda uone.
Hunhu uye kuchengetedza kwealbino Doberman
Wakave wakapihwa chipo here kana kuti uri kuenda kunotora albino Doberman? Pinda uye uwane utarisiro uye hunhu hwerudzi runoshamisa.
Inozivikanwa mhando diki dzembwa
Tsvaga mamwe emhando dzinozivikanwa uye dzinozivikanwa dzino diki dzembwa, kubva kune inozivikanwa Yorkshire kusvika kune yakashongedzwa Shi Tzu.
Xoloitzcuintle, rudzi runozivikanwa
Pakati pemhando diki dzinozivikanwa dzembwa muEurope tinowana xoloitzcuintle kana imbwa isina vhudzi yeMexico. Zvinotendwa kuti mhuka iyi yakazvarwa makore anodarika zviuru mazana manomwe apfuura uye kubvira ipapo haisati yashandiswa.
Mukuru Maltese Bichon
Imbwa yechikuru yeMalta imhuka inofara uye ine hupenyu inoda kutarisirwa chaiko, kunyanya kutarisira kwayo yakanaka chena mvere.
Nhoroondo, hunhu, kunyanya kutarisirwa kwembwa mhumhi
Kana iwe uchida iyo mhumhi rudzi rwembwa uye ungade kuva nayo imwe, iwe unofanirwa kutanga waziva hunhu hwayo uye kutarisirwa kwazvinoda.
Iye Mastiff wechiGerman ishamwari yakanaka pamba, akatendeka uye ane rudo kwazvo, kunyangwe kana zvasvika pakudzivirira nekuitarisira, ichiri kushanda. Isu tinokuudza hunhu, hanya, mhando uye maitiro ehunhu hweGerman Mastiff.
Pinda uye uone kuti Andalusian Podenco yakaita sei. Dzinza rembwa dzaharahara, iyi imhuka iyo inokunda pakarepo moyo yevanhu vayo. Isu tinokuudza kuti zviri sei, hunhu hwayo uye kutarisirwa kwazvinoda.
Leonberger: hunhu uye hanya
Iyo Leonberger ndeimwe yemhando huru dzembwa. Akadzikama uye ane runyararo nemasikirwo, anowanzo kuve anoshamwaridzana uye akangwara kwazvo.
Iyi imbwa imbwa hombe yakasikwa kuti ishande, kuchengeta imba nezvipfuyo uye zvakare muvhimi mukuru. Usapotsa maitiro ayo.
Hunhu hwembwa pfupi yeGerman imbwa
Isu tichakuudza kuti ndeapi maitiro eGerman Shorthaired Imbwa, imbwa ine furry iyo inoda kumhanya pamhenderekedzo uye kutamba nevana.
Mufudzi weAustralia imbwa inoda kuve inoshingaira. Akangwara, anoshanda nesimba uye ane rudo kwazvo. Ndezvipi zvimwe zvaungade? Pindai mugoiziva. Izvo zvakasiyana sei nemuganhu collie? Isu tinokuudza nezvazvo pano.
Chii chakaita imbwa yeRottweiler
Kana iwe uchitsvaga shamwari ine hura inokwanisa kugara newe, pinda uone kuti imbwa yeRottweiler yakaita sei, imbwa inofarira kushanda. Vane Rottweiler vane njodzi here? Isu tinokuudza hunhu hwayo, maitiro, zvakadii uye nezvimwe.
Inobereka: iyo yekuItari pointer
Pointer weItaly ndeimwe yedzinza rekare kwazvo dzembwa. Inesimba uye inochengetedza hunhu, inomiririra chimiro chayo chakanakisa uye simba rekuvhima rakasimba.
Makiyi kuhutano hweYorkshire terrier
Kunyangwe ichitaridzika kusimba, iyo Yorkshire Terrier imbwa yakasimba iyo inowanzo kuve noutano hwakanaka. Nekudaro, senge marudzi ese, iri nyore kubatwa nezvimwe zvirwere.
Hunhu hweNeapolitan Mastiff
Iyo ndeimwe yeakakura uye akanyarara imbwa dzinobereka kunze uko. Pinda uye uone kuti ndeapi maitiro eNeapolitan Mastiff.
Isingazivikanwe Inobereka: Caucasian Mufudzi
Mufudzi weCaucasian rudzi rwusingazivikanwe munyika medu. Isu tinokuudza hunhu hwayo hukuru, mabviro, tarisiro yeupenyu, hanya uye zvimwe zvakawanda pamusoro pemufudzi weCaucasian.
Chii chinonzi imbwa yemvura yeSpanish
Ndeipi imbwa yemvura yeSpanish yakaita? Kana iwe uchitsvaga ane rudo, akangwara uye akajairwa furry, usazeze, pinda unosangana neyakanaka rudzi urwu.
Greyhoung kana Chirungu Greyhound
Iyo greyhound kana yeChirungu greyhound imbwa yakatetepa, inononoka uye inomhanya kwazvo. Pakutanga kubva kuGreat Britain icho chipfuwo chakanakira mhuri yese.
Isu tinokudzidzisa maitiro ekuchengeta bvudzi rembwa yako yaBobtail uye hunhu kana hunhu hwerudzi urwu hunoratidzwa nehukuru hwaro nebvudzi refu.
Mhando dzakanaka dzevanhu vanoshingaira
Kupa hunhu hwavo, mamwe marudzi akakodzera kupfuura mamwe kune vanhu vanoshingairira, sezvo vachida kurovedza muviri nekutamba nguva dzese dzezuva.
Pomsky, chitsva chizvarwa chakagadzirwa chakagadzirwa
Iyo Pomsky chitsva chitsva chakagadzirwa muUnited States, iyo inosanganisa iwo makuru maficha ePomeranian neaya eSiberian Husky.
Misiyano pakati peBoston terrier neFrance bulldog
Iyo Boston Terrier neFrench Bulldog zvakangofanana-zvinotaridzika mhando, asi zvine mimwe misiyano inoita kuti zvionekwe nyore.
Zvinoda kuziva nezve rudzi rwebeagle
Iyo beagle irudzi rwepakati rwunomiririra chimiro chayo chaicho, hunhu hwaro hunoshamisa hwekunhuwa uye nehungwaru hukuru. Hupenyu hwake huzere nekuziva.
Ndeapi macustomer ayo Schnauzer anoda?
Uri kuenda kuve nenhengo nyowani mumhuri uye iyi shaggy Schnauzer? Iwe unoda kuziva hanya yavo here? Pinda uone.
Nzira yekutarisira sei Labrador?
Une labrador retriever mumhuri yako here? Kana hongu, saka iwe unofanirwa kuziva kuti imbwa idzi dzinotamba kwazvo, shamwari uye zvine hushamwari.
Zadza faira reMalta Bichon. Imhuka inofadza kwazvo: ine rudo, inotamba uye yakangwara kwazvo. Mukuwedzera, haidi kutarisirwa kwakanyanya. Svika pakumuziva iye mukutungamira kwedu kurudzi urwu matinokuudza iwe nezve kuchengetwa kwerudzi urwu, mangani makore rarinorarama, hunhu hwaro uye zvimwe zvakawanda zvinoda kuziva.
Chii chakaita imbwa yeNewfoundland?
Isu tinokuudza kuti imbwa yeNewfoundland yakaita sei, hofori ine hunhu inozviita inodiwa kubva pazuva rekutanga yainouya kumba. Imbwa yauri kutsvaga here? Tsvaga.
Manyepo enhema pamusoro paDoberman
Kwemakumi emakore, iyo Doberman yakave nyajambwa wenyaya zhinji dzinofungidzirwa nehupenyu hwayo uye maitiro. Isu tinoramba zvimwe zvacho.
Imbwa dzakachena uye imbwa dzembiru: dzakasiyana sei?
Imbwa dzakachena uye mamonrel dzakasiyana sei? Tichataura newe nezvazvo uye tinyore zvakanakisa zvekutora imbwa dzakavhengana!
Ndeipi imbwa diki pasi rese
Uri kutsvaga furry raunogona kusimudza nekumbundira pese paunoda? Pinda uye uone kuti ndeipi imbwa diki kwazvo pasi.
Ndedzipi imbwa huru dziripo
Isu tinokuudza kuti ndeipi imbwa huru dziripo. Tsvaga imbwa hombe idzo dziripo. Usapotsa.
Kuda kuziva nezve saluki
Iyo saluki, inonziwo Persian greyhound kana chiPersian whippet, imbwa yekuMiddle East, inozivikanwa nekugona kwayo uye mutete.
Matipi ekudzidzisa iyo Spanish greyhound
Uri kuenda kunotora here kana kuti pamwe ununura Spanish greyhound uye iwe hauna chaunoziva nezve rudzi. Pinda uye uwane rakanakisa rairo pazera iri.
Curiosities nezve bobtail
Nhoroondo yebobtail yakakomberedzwa necuriosities. Kubva kuBritain, ndiyo imwe yemhando dzakakurumbira nekuda kwehunhu hwayo.
Nzira yekusarudza rudzi rwembwa
Uri kufunga kuva neine furry imwe pamba here? Kana zvirizvo, pinda uye isu titsanangure nzira yekusarudza rudzi rwembwa. Usapotsa.
Ichokwadi nezve ngano yeSaint Bernard uye dhiramu
Iyo iconic yemufananidzo weSaint Bernard ine dhiramu rakakomberedza mutsipa wake wakatangira mune yeXNUMXth kupenda, asi hapana humbowo hwekuti ichokwadi.
Zviduku Zviduku: Norwich Terrier
Iyo Norwich Terrier imbwa diki yekuberekesa, yechirungu mavambo, ine inofara uye ine simba mafungiro. Hama dzayo dzepedyo ndeye Yorkshire uye iyo Fox Terrier.
Siberian Husky kutarisirwa kwebvudzi
Tsvaga iyo yekutarisirwa kwejasi reiyo Siberian Husky, rudzi rwunozivikanwa nekunaka kwarwo kukuru uye nebvudzi raro rakanaka uye rakakora.
Ndeapi marudzi akanakisa embwa kana ndine mwana?
Une mwana here uye urikutsvaga imbwa yakakodzera? Muchinyorwa chino tinonyora mamwe emhando dzinonyanya kushivirira, dzemagariro uye dzinonakidza
Yakadii Afghan Greyhound
Ungada here kuziva kuti Afghan Greyhound yakaita sei? Usazeze kupinda kuti uwane kwayakatangira, uye hunhu hwayo. Inogona kunge iri furry yauri kutsvaga. ;)
Chii chakaita imbwa dzeBulldog?
Isu tinokuudza iwe zvakaita imbwa dzeBulldog, dzakanaka imbwa dzine hura dzinongoda rudo rukuru uye kufamba kwemazuva ese kuti vafare.
Iri sei pointer yechiGerman
Isu tinokuudza iwe icho chiGerman chakapfupiswa pointer senge, rudzi rwembwa inozivikanwa nehungwaru uye kuvimbika. Tsvaga kana iri imbwa yawaitsvaga. ;)
Kuchengetwa kukuru kwaPug
Carlino kana Pug ndeimwe yemhando diki dzinozivikanwa nhasi, idzo dzinotarisirwa pameso, ganda uye tembiricha.
Hunhu uye hunhu hwaPaulistinha Fox kana weBrazil Terrier
Unoziva here rudzi rwembwa inonzi Fox Paulistinha kana yeBrazil Terrier? Tsvaga hunhu hwavo uye unakirwe nekudzidza nezverudzi urwu runoshamisa rwembwa.
Pane here misiyano pakati peAmerican neGerman Rottweiler?
Nepo vamwe vachitenda kuti pane musiyano mumwechete weRottweiler, dzimwe dzidziso dzinosiyanisa pakati peAmerican neGerman. Isu tinotaura nezve mutsauko wavo.
Kwakatangira uye hunhu hweiyo Rhodesian imbwa yakadzika
Iyo Rhodesian Ridgeback imbwa inoratidzirwa nechakachinjika chimiro chebvudzi, tsvaga hunhu hwayo uye mavambo.
Isu tinokuudza kuti ndeapi marudzi ePit Bull. Kana iwe uri kufunga kuve neyako, zvichave nyore kwazvo kwauri kuti usarudze rudzi nesu. Kupinda.
Ndeapi imbwa diki pane ese marudzi munyika?
Iwe unoziva here kuti ndeapi madiki madiki emhando dzembwa? Tsvaga runyorwa rwembwa diki uye isu tinogovana newe imbwa diki kwazvo pasirese, inoyevedza!
Shiba Inu uye nehanya panguva yekuteura
Iwe unayo Shiba Inu uye unoda kuziva zvese nezve rudzi urwu? ipapo iwe uri kuverenga iyo chaiyo posvo, cherekedza iwo matipi.
Ari sei Chirungu Cocker Spaniel
Isu tinokuudza kuti chii chinonzi English Cocker Spaniel, rudzi rwakanaka rwembwa inozoenderana nekugara zvese muguta nemunyika.
Yakawanda Sei Inofanirwa Pakati Pakati Poodle Kuyera
Isu tinokuudza kuti imbwa yepakati Poodle inorema sei, yakanaka uye ine hushamwari furry yaunogona kushandisa isingakanganwike nguva.
Iwe unogona sei kusimudza nzeve dzePrague buzzard yako
Isu tinokuudza iwe kuti ungawana sei nzeve dzePrague buzzard kuti irambe iri munzvimbo yakatwasuka zvakadaro hunhu hwerudzi urwu.
Kwakatangira uye nhoroondo yePekingese
Iyo Pekingese idiki rudzi rwekuzvarwa kuSoutheast Asia, iyo yakapararira muEurope neAmerica zvakanyanya nekuda kwamambo Tzu Hsi.
Misiyano uye hunhu hweAmerican neGerman Rottweiler
Mune ino chinyorwa isu tinogona kukubatsira iwe mune yako sarudzo nekukuratidza iwe mutsauko uye hunhu hweAmerican neGerman Rottweiler.
Tinofanira kufudza sei Pitbull?
Kunyangwe maPitbulls achiwanzo kuzivikanwa sembwa dzine njodzi, kana isu tichivapa kutarisirwa kwakakodzera, vanoita zvipfuyo zvakaisvonaka.
Uri kufunga nezvekuwana imbwa hombe? Kana iwe uchitsvaga iyo inodawo uye yakadzikama, pinda uye uone kuti rakakura sei Dane.
Ungadzidzisa sei Ca de Bestiar kana Mallorcan Mufudzi
Iwe uchangobva kuwana kana kutora Mallorcan Shepherd? Kana zvirizvo, pinda mukati uone kuti ungadzidzise sei Ca de Bestiar kuti amufadze.
Maitiro ekuchengeta maziso ePoodle
Iwe unogara neimwe yeaya anoshamisa furry? Kana zvirizvo, tsvaga maitiro ekuchengeta maziso ePoodle kuitira kuti vagare vakagwinya.
Ndeapi marudzi makuru embwa pasi rose?
Iwe unoziva here kuti ndeapi makuru marudzi emhando dzenyika? Muchikamu chino tinokubvisa mukukahadzika. Iwe unozoshamiswa nehukuru hweaya anokwezva mahofori!
Yakadii iyo Portuguese Podenco
Uri kutsvaga rudzi runoshanda uye runofara rwembwa iyo iwe yaunogona kunakidzwa nayo yakawanda kunze kwekunze? Pinda uye uone kuti chii chinonzi Portuguese Podenco. ;)
Ndeupi rudzi rwembwa iyo labradoodle?
Iyo Labradoodle inoberekwa kubva musanganiswa pakati peLabrador Retriever neAustralia Poodle, iyo kusvika parizvino isina kuzivikanwa sedzemutemo rudzi.
Ari sei Boxer
Kana iwe uchida kurarama neakanakisa furry, pinda uye isu tinokuudza iwe zvakaita iye Boxer, imbwa iyo iwe yaunogona kushandisa iyo yakanakisa makore gumi ehupenyu hwako. ;)
Chii chaunofanira kuziva nezvePoland Plains Sheepdog
Iyo yePoland Plains Sheepdog rudzi rwakasimba, rune simba uye rwakavharwa, rine basa guru mumazana emakore apfuura raive rekufudza.
Nzira yekuchengetedza toy poodle
Iwe uchangobva kuwana furry yerudzi urwu here? Uya upinde uye isu titsanangure maitiro ekuchengeta toy poodle kuitira kuti igofara newe kubva pazuva rekutanga.
Ko pit bull zvine njodzi here kana tine vacheche kumba? Muchikamu chino tichataura nezvehunhu hwerudzi urwu uye nezvehukama hwayo nevana vadiki
Sei kudzidzisa Beagle puppy
Iwe uchangobva kuwana furry imwe yerudzi urwu here? Pinda tinokuudza maitiro ekudzidzisa mwana weBeagle kuti afare newe.
Zviduku zvidiki: Bolognese
Yekutanga kweItaly, iyo Bolognese imbwa diki, ine hura hwakareba uye nechitarisiko chinoratidzika. Akangwara uye ane rudo, zvinokodzera mhuri yese.
Tsvaga iyo mhando yeBelgian Malinois
Iyi imbwa yakangwara iyo inowanzoshandiswa mumabasa senge kufudza uye kunyangwe izvi zvinogona kuve vadziviriri, vachengeti uye vateveri.
Maitiro ekuchengeta iwo makwinya eShar Pei
Iwe unayo imwe yeaya furry kune mumwe wako here? Tsvaga maitiro ekuchengeta iwo makwinya eShar Pei kuti igone kukura uye kuve noutano.
Zvinoda kuziva nezve iyo Dachshund
Iyo Dachshund rudzi rwunozivikanwa nekunaka kwarwo chitarisiko, kureba kumashure uye mapfupi makumbo. Nhoroondo yaro izere necuriosities.
Chii chinonzi Airedale Terrier yakaita?
Uri kutsvaga yakashata furry yekushandisa akanakisa makore gumi nemaviri ehupenyu hwako? Pinda uone kuti Airedale Terrier inoita sei.
Maitiro ekudzidzisa Doberman
Iwe uchangobva kuwana furry yerudzi urwu here? Kana iwe uchida kuve neakanyatsodzidziswa furry, pinda uye isu tinokuudza iwe kuti unodzidzisa sei Doberman.
Maitiro uye hunhu hweCockapoo imbwa dzinza
Cockapoos rudzi rwunozivikanwa kwazvo rwembwa mune dzimwe nyika uye musanganiswa wemhando dzePoodle neCocker, imbwa dzinopenga!
Maitiro uye hunhu hwembwa yePitsky
Aya ndiwo akakosha hunhu hwerudzi rwePitsky, inova mhedzisiro yemuchinjikwa pakati pemarudzi ePitbull nerudzi rweHusky
Kunyangwe hazvo kuti Poodle yakabva kupi isingazivikanwe, imwe yedzidziso dzinogamuchirwa ndeyekuti inodzika kubva kuBarbet Spaniel yekare, muFrance.
Iri sei Yorkshire Terrier
Kana iwe uchitsvaga diki furry, inorema isingasviki matatu kilos, iyo yaunogona kutora kufamba kana kukwira, pinda uone kuti Yorkshire Terrier yakaita sei.